Askar Ameerikaan ah oo Ciraq lagu laayay,Xilli madaxda Mareykanka ay hadallo is burinaya ka sheegayaan mustaqbalka ciidankooda ku sugan Ciraq. | Nabadi caadalad ayaa kaa horresa
Askar Ameerikaan ah oo Ciraq lagu laayay,Xilli madaxda Mareykanka ay hadallo is burinaya ka sheegayaan mustaqbalka ciidankooda ku sugan Ciraq.	Seteembar 25, 2008
In kabadan 8 askari oo Mareykan ah ayaa ku halaagsantay dalka Ciraq maalmihii ugu danbeeyay kadib markii Diyaarad ay kuwa lasoo dhacday halka askar kalena lagu dilay weeraro toos ah oo Mujaahidintu la beegsadeen.
Arrimahasi ayaa imaanaya xilli madaxda Mareykanka iyo Generaaladooda ku sugan Ciraq ay ka sheegayaan hadallo isburinaya mustaqbalka Ciidamadooda ku le’anaya dalkaasi Ciraq, waxaana ay taasi tusineysaa jabka cadowga ee ay qarin la’yihiin.
7 askari oo Ameerikaan ah ayaa ku bakhtisay markii ay diyaarad nooca CH-47 Shinook ee Somalida u taqaano Laba Matoorey ay kula soo dhacday magaalada Basra ee koofurta Ciraq,waxaana ay warbaahinta gaaladu sheegtay in ciidanka halkaasi ku halaagsamay ay ka yimaadeen dalka Kuwait kuna soo jeedeen deegaano kamid ah Ciraq.
Cadowgu ma sheegin sababtii diyaaradda ay usoo dhacday maadaama ay warbaahintooda la safan tahayna lama sii weydiiyo waxa ay ka gaabsadaan ee waxay yiraahdaan waa laga gaabsaday sababta ka danbeysa soo dhicitaanka diyaaradaasi.
Askari kale ayaa ku qudh baxay weerar ka dhacay bartanka magaalada Baqdaad,iyadoona madaxweyne Bush-ka hogaamiya dagaalka Saliibiyada uu sheegay in ay ciidamadooda lasoo baxayaan cutubyo kamid ah halka generaalada gudaha joogana ay sheegayaan in aysan taasi dhici karin.